Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Ibhendi Elibhulashiwe Isakazekile
Ikhaya / Amanzi okugeza / Oompompi Bendawo Yokugeza Abasakazekile / WOWOW 8 Inch Esakazekile Umbhobho Wokugeza Wokugeza Ibhulashi
I-WowOW 8 Inch Ebanzi Yendawo yokugezela ifenisha eyakhiwe ngo-Nickel
I-BRUSHED NICKEL FINISH, ISIXHUMANISI SETHUSI ESIQINILE: isixhumi esinamandla se-arc sokugezela esisezingeni eliphezulu esigcwele i-nickel finish, indawo ecwebezelayo, i-anti-scratch, engagqwali, ayikho indawo yamanzi nokuphrinta kweminwe, isixhumi sethusi esiqinile siqinisekisa ukusetshenziswa isikhathi eside.
IZIMBAMBA EZI-2, 360° I-SPOUT EPHEZULU: idizayini ye-lever yesibambo engu-2 elula yokulawula okunembile kokubili kwevolumu nokushisa kwamanzi, i-spout yesikwele esikhethekile sokugeza okulula, asikho isidingo sokwelula izandla zakho kude.
I-CREATIVE QUICK INSTALL: ukwakhiwa okuhlukile kokuxhuma okusheshayo, amanzi ashisayo nabandayo angaxutshwa ngepayipi elifakwe ngokushesha ngaphandle kwe-wrench, ngokusebenzisa inqubo yokuvimbela ukuqhuma kwepayipi.
IDIZINZO ONGAHLANGANISWA KAHLE: 4 -16” ompompi bamagumbi okugezela abasabalele abanezimbobo ezi-3, ibanga lokufakwa lingalungiswa ngokuhambisana nezidingo, ilingana nendlu eqashisayo, i-condo entsha, ifulethi elilodwa, ikhaya lemoto, inqola yokuhamba kanye nokusetshenziswa komndeni.
Isikebhe sokugeza sigaxekile isiteketiso sisakazekile ngo-2320300
Ubuwazi ukuthi umbhobho wakho wokugezela ungenye yezinto ezibaluleke kakhulu endlini yakho yokugezela ngokwakhiwa? Ngisho nazo zincane, ompompi bangaba nomthelela omkhulu ekuhlobiseni kwakho kwendlu yangasese. Oompompi bezindlu zangasese yindawo yokugxila engokwemvelo kunoma yikuphi ukuklanywa kwendlu yangasese. Lokho kusho ukuthi lapho umuntu engena endlini yokugezela, enye yezinto zokuqala ukunakwa kwakhe, yizimpompi zangasese. Ngakho-ke ipayipi lokugezela lingenza umthelela omkhulu kunoma iluphi uhlobo lwendlu yokugezela futhi kufanele lukhethwe ngokuhlakanipha.
Lokhu kubonisa ukuthi kufanele ukhethe kahle ompompi wakho yokugezela. Ungahle ube nesabelomali (esihlanganisiwe) sendlu yakho yokugezela entsha. Imvamisa siyabona ukuthi ompompi bendawo yokugezela abafakiwe ekwakhiweni kwasekuqaleni nakwisabelomali. Oompompi bezindlu zangasese ngenxa yalokho bavame ukukhethwa kuphela ekugcineni kwenqubo, ngenkathi indlu yokugezela isivele ifakiwe. Kungaba yinselelo impela ukuthola ompompi bendawo yokugezela elingana konke okuncamelayo kokuklama nesabelomali sakho. Izabelomali zangasese zivame ukuphela ekugcineni ngenxa yezehlakalo ezingalindelekile, futhi awufuni ukuyekethisa ekwakhiweni nasekhwalithi ukhetha ompompi bakho bokugezela. Ikakhulukazi lapho wazi ukuthi lezi zimpompi zokugezela zingaba nomthelela omkhulu ekuhlobiseni kwakho konke okugeza. Ngakho-ke kuhle ukwazi ukuthi i-WOWOW ikunikeza ompompi bokugezela abanesitayela nenhle ngamanani aphansi. Ngenxa yalokho, i-WOWOW ikunikeza inani elingcono kakhulu lemali.
Isikhiphi sokugezela sensimbi eqinile sibhebhetheke ngobuningi
I-WOWOW's bathroom bathroom brushed nickel isabalale yenziwa ngensimbi eqinile. Uzoyibona ngokushesha lapho uphethe le ompompi yokugezela ngesandla. Ipayipi lokugezela lishaye i-nickel enesisindo esisabalalisiwe 3.8 lbs eveza ikhwalithi yayo ngaphandle kokungabaza. Ungaqiniseka ngompompi wokugezela osezingeni eliphezulu ozohlala iminyaka eminingi, eminingi. Impela, izinto zethusi eziqinile zingcono kakhulu kunezinye izinsimbi. Ngalolu hlobo lokuqukethwe okukhulu kwensimbi akudingeki ukhathazeke nakancane ngezinkinga zokugqwala ngokwesibonelo. Ngaphandle kwalokho, izinto ezisezingeni eliphakeme zinikela ngozinzo nempilo yomkhiqizo ephezulu. Ikhwalithi yakho yamanzi nayo ayizohola futhi ngenxa yalokho ikhethe kangcono kakhulu empilweni yakho.
Ngaphandle kwalokho, ipayipi lokugezela elihlanjululwe nge-nickel lasabalala laqedwa nge-nickel ebusweni. Lokhu ukuphela akusiniki nje ukuthinta okuhle ekwakhiweni kwakho kwendlu yangasese, kubuye kugqoke ukumelana. Isiphetho se-nickel ebhulashiwe sivimbela umswakama nokuklwebheka, okwenza ukuthi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sokugezela sishaye i-nickel sisabalale- futhi kungenabala. Ngakho-ke ukunethezeka okunokhiye ophansi endlini yakho yokugezela, okulula ukuyihlanza ngokusula ngendwangu. Kulula kanjalo!
Isikhiphi sendlu yangasese esakhiwe ngesibindi sande kabanzi
Isikebhe sokugezela seWowow's brunch nickel sibanzi sibonisa isendlalelo sendlu yokugezela ebanzi ehlangabezana nezidingo zakho zokulungisa umthamo wamanzi ashisayo nabandayo ngokwahlukana. Umklamo osabalele-ke futhi ungashintshwa usuka ku-4 kuye ku-16 inch. Isikhiphi sidinga nje umgodi we-3-hole futhi nebanga lokufaka lingashintshwa kulokho okuthandwa nguwe nezidingo zakho.
Isikwele esiphakeme esiphakeme ngokuqinisekile siyiklamo eliyingqayizivele ongeke ulibone kwamanye amafekhethi amaningi okugezela ongawathola emakethe. Imisele eminingi yokugezela ibukeka ifana. Ukuthola okuthile okukhethekile maqondana nemifula kungaba nzima kakhulu. Ngaphandle komklamo wayo ogqamile, isiponji esiphakeme sendlu yokugezela esigcwalisiwe sikunikeza ukucacelwa okwanele ngaphansi kwesihlwitha ukuze unikeze induduzo ephezulu. Ngakho-ke le faucet yokugezela eyingqayizivele eyisikwele ikunikeza sobabili isici sanamuhla nenduduzo ngasikhathi sinye. Ngokwazi cishe, ngeke uze welule izandla zakho kude ukuze ufinyelele ukugeleza kwamanzi. Lokho kuyenza kube umsebenzi ophumelelayo.
Isikebhe sokugeza esisetshenziswe kalula
Izibambo ezi-2 zaleli faucet yokugeza elula zikunikeza ithuba lokulawula ngokunembile kokubili umthamo kanye nokushisa kwamanzi. Izibambo ezi-2 zenziwe nge-alloy eqinile futhi zinikeza ukubamba okulula nokho okwenziwe kahle. Hhayi kuphela isikebhe sokugezela esine-nickel esesabekayo esingasebenza kahle, futhi isiponji ngokwaso sinikeza ukufinyelela kwama-degree angama-360. Ngakho-ke ungabeka isekeli lokugezela eligcwele i-nickel lisakazeka ngendlela evulekile kuwe, futhi ungaliphindisela emuva. Lokho kwenza kube lula ukuhlanza ukucwilisa kwendlu yakho yokugezela ngokwesibonelo.
Ngaphandle kokusebenza kwayo okulula, isikulufu sokugeza esine-nickel kubanzi singafakwa kalula. Isici sayo sokufaka okusheshayo sokudala siyingqayizivele emakethe. Lokhu kwenza ukuthi sikwazi ukunamathisela konke ukuxhumana ngokuphepha futhi kalula nguwe. Izintambo zamanzi ashisayo nabandayo zihlanganiswa yipayipi yokufaka esheshayo engamane inamathiselwe ngaphandle kwesikhonkwane. Ngale ndlela eqondile futhi uyaqiniseka ukuthi amapayipi akho amanzi ngeke aqhume. Isikebhe sokugezela esine-nickel sisakazeke kabanzi kulula ukusifaka ngaphandle kwepulangwe elibizayo.
Isikhuhlu sokuhlanza iwaranti sanda kakhulu
Ububanzi bepayipi lokugezela i-nickel busakazekile buza nazo zonke izinto ezidingekayo, kufaka phakathi ikhithi yokufaka. Ngaphandle kwe-spout square square kanye nezibambo zayo ezi-2, iphakethe liza nomsele wamanzi, amapayipi amanzi ama-2 cm angama-50 cm amanzi abandayo futhi ashisayo, i-1 pop up strain stopper kanye neqoqo eliphelele lezesekeli namathuluzi.
Njengoba i-WOWOW iqinisekisa ukuthi inikeza inani elingcono kakhulu lemali, ipayipi lokugezela elihlanjululwe nge-nickel lisabalele liza nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90. Uma ubungeke umangale ngenani lemali olitholayo, ungabuyisa i-nickel brush nickel esakazekile ngaphandle kwezinkinga. Uqinisekisiwe ngokubuyiselwa imali ngokugcwele ngaphandle kwemibuzo ebuziwe. Ngaphandle kwalokho, i-WOWOW ikunikeza isikhathi sewaranti seminyaka emi-3. Uma ipayipi lakho lokugezela elihlanjululwe nge-nickel lisabalele ngeke lenze ngendlela obungalindela ukuthi lenze ngayo, i-WOWOW izothatha indawo yompompi wakho wokugezela ufake entsha sha. I-WOWOW ithatha umthwalo wayo ngokungathí sina futhi asisoze sakudumaza.
Izinzuzo zasesekeni lokugezela zigcwele i-nickel zisakazeke ngamafuphi:
• Idizayini eyingqayizivele eyi-7
• Izinto ezinkulu zensimbi
• Ukukhuthazela impilo yonke
I-SKU: 2320300 Categories: Amanzi okugeza, Oompompi Bendawo Yokugeza Abasakazekile Tags: 2 Izibambo, I-Nickel ehlutshiwe
11.2 x 10.1 x amasentimitha angu-3.2
I-Brass / Insimbi Engagqwali / I-Zinc Alloy
Amanzi ashisayo / abandayo